Kwụsị ikwu okwu ma gee ntị | Martech Zone
Mgbasa mgbasa ozi bụ -elekọta mmadụ. Anyị niile anụla otu nde ugboro. Ihe mere anyi ji nu ihe a otutu oge bu nihi na obu nani otu iwu iwu ka enwere ike igwa ya banyere ndi mmadu.
Nsogbu kasịnụ m na-ahụ mgbe niile bụ na ndị mmadụ na-agwa ndị na-eso ụzọ ha okwu kama ikwu okwu na ha.
Na nso nso a, anyị hụrụ mkpesa ndị ahịa na Twitter gbasara otu n'ime ndị ahịa anyị. Ọ bụ ezie na mkpesa ndị ahụ adịghị agwa ndị ahịa ahụ, anyị kpebiri na ụzọ kachasị mma ga-abụ ịzaghachi ma gosipụta na anyị na-ege ndị ahịa anyị ntị, na anyị nọ ebe a iji nyere aka.
Onye ahịa ahụ zara na nkwenye anyị maka ya bụ nkwụghachi ụgwọ maka mkpesa mbụ. Ya mere iji weghachite, onye ahịa nwere mkpesa ma kwupụta ya na Twitter. Onye ahịa anyị na-azaghachi ma na-enye aka iji nyere aka, onye ahịa ahụ weere na onyinye ahụ ga-ezuru iji jigide iguzosi ike n'ihe ha.
Nke a bụ ihe mmekọrịta mmadụ na ibe ya gbasara. Kama ịmepụta ọdịnaya naanị na-agwa ndị na-eso ụzọ gị okwu, wepụta oge na-ege ntị ma na-akparịta ụka na-eme na ntanetị. Nke a na-alaghachi na isi ihe mbụ na mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ọ dịghị onye na-enwe mmasị na onye na-enweghị ike ime ihe ọ bụla, mana na-ekwu maka onwe ya na ihe ọ na-eme. Wepụta oge iji gee ntị, ma sonye na mkparịta ụka na-akwadoghị ihe ọ bụla azụmahịa gị na-eme.
Dị ka Ernest Hemingway kwuru n'otu oge, “Achọrọ m ị listena ntị. Amụtawo m ihe dị ukwuu site n'ige ntị nke ọma. Ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ adịghị ege ntị. ”
Tags: egeelekọta mmadụ mediaSocial Media Marketingna-ekwu okwu
Enweghị m ike ikwenyekwu
na gị. Iji usoro mgbasa ozi dị ka ọrụ ndị ahịa abụghị naanị nkwanye ùgwù na
enyi na enyi maka ndị ahịa gị, mana ọ nwekwara ike iwepụta ọtụtụ okporo ụzọ,
mara ihe ma ọ bụrụ na emee n'ụzọ ziri ezi na n'ụzọ na-atọ ọchị, ọ nwere ike ịmalite ịrịa na nke ahụ bụ ihe dị oke ọnụ ahịa.
N'afọ gara aga, anyị nwere ike ịhụ nnukwu ihe atụ nke Bodyform mere na nzaghachi
Richard Neill. Ihe ndị a bụ naanị nnukwu ma ụdị kwesịrị ilekwasị anya na nke ahụ. Ntị bụ isi ihe niile.